04 / 11 / 2019 | RayHaber
နေ့: နိုဝင်ဘာလ42019
xnumx'l တစ်နှစ်သာအချို့သောဥရောပကားများ, အမေရိကန်ကားများနှင့်တူရကီနိုင်ငံရှိကြ၏အထိပါပဲ။ 1960 တော်လှန်ရေးအပြီးတွင်သမ္မတ Cemal Gürsel၏အမျိုးသားမော်တော်ကားဆောက်လုပ်ရန်တောင်းဆိုမှုနှင့်အညီEskişehirTülomsaşကို 1960 တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
အိန္ဒိယစီးပွားရေးနှင့်ရထားလမ်းစနစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်သတ္တမမြောက်အကြီးဆုံးပထ ၀ ီareaရိယာနှင့်ဒုတိယလူ ဦး ရေအများဆုံးဒေသဖြစ်သည်။ လူ ဦး ရေမှာ 1,3 ဘီလီယံဖြစ်ပြီးNရိယာမှာ 3.287.259 km²ဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
Sanliurfa တွင် 24 နာရီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
Sanliurfa နိုင်ငံသားများအတွက်တူရကီအရှည်ဆုံးလမ်းကွန်ယက်ကိုရည်ရွယ်ချက်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, နောက်ဆုံးတော့လိုင်းများကိုရေတွက်အမှတ် 71 76 24 နာရီလိုင်းအတွက်တည်းဖြတ်မူများကိုသွားကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု၏တဦးတည်းရှိခြင်း [ပို ... ]
Konya မြေအောက်ရထားပေါ်တွင် Bursa Metro စီမံကိန်းများစောင့်ဆိုင်းနေဆဲဖြစ်သည်
သင်သည်သင်၏ Kentis တစ်ဦးညာဘက်တူရကီရဲ့စီးပွားရေး၏ခေါငျးရှိသည်, ဒါပေမယ့်ကိုအပ်ဘူး။ သင်၏မြေအောက်ရထား၊ မြန်နှုန်းမြင့်ရထားနှင့်သင်၏ခရိုင်များအကြားလုံခြုံသောလမ်းစီမံကိန်းများမပြီးပါ။ မနေ့က Bursa ကိုစိတ်ပူနေတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အီးမေးလ်ကိုပို့လိုက်သည်။ Konya [ပို ... ]
Bursa မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်းသည် ၀ န်ကြီးများကောင်စီ၏အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သည်
Bursa မြန်နှုန်းမြင့်ရထားစီမံကိန်းသည်ဝန်ကြီးများကောင်စီ၏အစီအစဉ်တွင်ဖြစ်သည်။ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာကုန်သည်ကြီးများအသင်း Bursa ဌာနခွဲ၏ဥက္ကPresident္ဌ Mehmet Albayrak ကဖွဲ့စည်းသည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကော်မရှင်သည်မြို့၏အချက်အချာကျသောအကြံဥာဏ်များကိုတင်ပြရန်နှင့်အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ယခင်က Osmangazi တံတားမှမီးရထားလမ်းများကိုဖယ်ရှားခဲ့သည် [ပို ... ]
Gaziray ဘူတာမှာပျက်သွား! : TCDD'in Gaziray Suburban Project မှထောက်ပံ့ခဲ့သော Gaziantep Metropolitan Municipality သည်မြေပြိုကျမှုဘူတာတွင်Başpınarလမ်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဒေသတွင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်၍ အာဏာပိုင်များထံမှသတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိခဲ့သည့်အင်းဘိုင်း [ပို ... ]
RayHaber 04.11.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
မီးရထားလမ်းသည် 50 နှစ်အတွက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်
Eskişehirမီးရထားလုပ်ငန်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကျောင်း၏ 1974-1975 ဘွဲ့ရများ၊ သူတို့သည်EskişehirရှိTülomsaşခန်းမ၌ကျင်းပခဲ့သောအစည်းအဝေးနှင့်အစည်းအဝေးလှုပ်ရှားမှုများတွင်သူတို့၏ 'ရာစုနှစ်ဝက်ကျော်အမှတ်တရများ' ကိုအချင်းချင်းဝေမျှခဲ့ကြသည်။ တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏သမ္မတနိုင်ငံ (TCDD) အသက်မွေးမှုကျောင်း 1974- 1975 [ပို ... ]
Bolu ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်ငွေအများစုသုံးစွဲ; တူရကီစာရင်းအင်းအင်စတီကျုက, အစ္စတန်ဘူလ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုအားဖြင့်ဖြန့်ချိအချက်အလက်များအရသိရသည်အိမ်ထောင်စု Bolu သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အများဆုံးပိုက်ဆံကုန်။ Kocaeli ဒေသကြီးအတွက်တူရကီစာရင်းအင်း Institution မှ [ပို ... ]
အများပြည်သူသုံးဘတ်စ်ကားများကို Istanbul Metropolitan Municipality မှရှင်းလင်းချက်
အများပြည်သူသုံးဘတ်စ်ကားအကြောင်း IMM မှBeşiktaşရှိ Dalan Durağıသို့ရှင်းပြခြင်း၊ ဒဏ်ရာရထားသောဘူတာသို့ ဦး တည်ရွေ့လျားနေစဉ် Ortakoy 13 ပုဂ္ဂလိကအများပြည်သူသုံးဘတ်စ်ကား၏လမ်းကြောင်းမှ Besiktas သည်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှကျဆင်းခဲ့သည်။ ဒဏ်ရာရသူတစ် ဦး မှာကြားဝင်ဖြန်ဖြေမှုအားလုံးအတွက်တာဝန်ရှိသည် [ပို ... ]
နိုဝင်ဘာလတွင်တရုတ်နိုင်ငံမှဥရောပသို့6သို့ပထမဆုံးတင်ပို့မည့်ရထား
တရုတ်, Marmaray တရုတ်မီးရထား Express ကိုသုံးပြီးဥရောပသွားပထမဦးဆုံးကုန်တင်ရထားထံမှထွက် ထား. Kars မှတဆင့်တူရကီထဲသို့ဝင်ခဲ့သည်။ ရထားသည် Ankara ဘူတာသို့ရောက်ရှိမည့်6ကိုနိုဝင်ဘာလတွင်ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီး Cahit Turhan ကကျင်းပခဲ့သည်။ [ပို ... ]
အဆိုပါသံပိုးလမ်းမကြီး၏ပထမဦးဆုံးမီးရထားတူရကီထဲသို့ဝင်ပြီးလျှင်, တရုတ်နှင့်တူရကီနိုင်ငံ၏ခေါင်းဆောင်မှုအောက်, 653ဘီလီယံအထိလူဦးရေကိုထိခိုက်လိမ့်မည်ဟုစီမံကိန်း၏ "တစျခုမှာခါးပတ်တစ်ခုမှာလမ်းမ" အရေးပါအဆင့်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ပြီးစီးခဲ့သည်။ စီမံကိန်းအတိုင်းအတာ [ပို ... ]
TÜVASAŞသည်ရထားစီမံကိန်းအတွက်စုစုပေါင်း 12 အင်ဂျင်နီယာ ၀ န်ထမ်းများခန့်ထားမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ အမျိုးသားရထားစီမံကိန်းတွင်စက်မှု၊ လျှပ်စစ်၊ စက်မှု၊ သတ္တုဗေဒ၊ ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာဌာနမှဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ [ပို ... ]
ယနေ့သမိုင်းတွင် - 16 ဒီဇင်ဘာ 1947 Palu-Young မီးရထား